Nhau Blog yeIndi Tagged "Kuziva uye Zivo" - THE INDIAN FACE
70% yemazuva edu anoshandiswa pamberi pechidzitiro, tichisiya huropi hwedu mune otomatiki maitiro. Nekudaro, iwe kana iwe uchipa iyo yakachena adrenaline kumhanyisa, zvese zviri mukati medu zvinogadziriswazve: kugona kunowedzera, tinonzwa tiri vapenyu, tichifara, zvakanaka. Akawanda sei mabhenefiti! Iwe unoda kuziva here zvinoitika kumuviri wako kana iwe uchidzidzira mitambo yakanyanyisa? Tinokuudza zvese.
Kadzika pasi pemvura inogoneka
Kana mutambo nesainzi zvikauya pamwechete zvinoita zvinhu zvisingaite, kazhinji zvinogara zvakabatana nekutsvaga. Ndokusaka muchinyorwa chedu nhasi tichitaura nezve 'chaiwo makambi' evakasiyana, matende ari pasi pemvura, kwavanogona kuzorora vasina kuenda kumusoro. Izvi zvinogoneka sei? Isu tichakuudza.
4 nzvimbo dzinoitirwa kunyangarika nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze
Unogona here kufungidzira kuti mumakore zana, izwi "Girazi"uve chikamu chenhoroondo. Dai May snowboard muAlps zvinoitwa pachando chechando. Iyo Venice, unogona kungoiona mumifananidzo nekuti haisisipo. Izvo ku Kudhiraivha iwe unogona chete kutarisa yakadzika yebhuruu pasi, isina matombo uye hupenyu hwemumvura. Zvinonzwika zvakaipa handizvo here? Muchinyorwa chedu nhasi, tinokuudza nezve idzi nzvimbo dziri kutsakatika kana tikasaita nekukurumidza!
Chitsuwa chikuru chemarara muPacific, nzvimbo isina anotaura nezvayo asi isu tese tinofanira kuziva nezvayo.
PaZuva reWorld Recycling Zuva, tinokuunzira chinyorwa nezveGreat Pacific Garbage Island. Iyo "oasis" hombe iyo inoumbwa nemarara nemarara epurasitiki atinozvigadzirira isu. Uye zvakare, isu tinokuudza zvese nezvaBen Lecomte, nyanzvi yekutuhwina uyo rwendo rwake rwave kutungamira kufunda kwechitsuwa ichi uye kuti chinobata sei nharaunda uye nesu sechisikwa.
Adrenaline: Chii uye kuti inobata sei huropi panguva uye mushure memitambo
Kusvetuka uchibva mundege kuenda kunzvimbo isina chinhu, uchiita kubhururuka kwemakomo uchimhanya zvakanyanya, kana kunyatsotsvedza pane dombo bay, zviitiko zvinoita kuti iwe ufunge nezve chinhu chimwe chete: Adrenaline. Pano isu tinokudzidzisa iwe zvese izvo zvaunofanirwa kudzidza nezve ino chaiyo mahormone uye iyo mhedzisiro yainoita pauropi hwedu.
Pfungwa dzekugadzirisa nekushandisazve ako ekare surfboards!
Mabhodhi edu epamhepo anotiperekedza mune edu ese mafambiro pamafungu, iwo mabatiro edu makuru, vanova anenge anowedzera muviri wedu kana tichipinda mugungwa. Saka nei uchionekana navo kana basa ravo mumvura risingachakwanise? Mune ino posvo tinokupa iwe akawanda mazano uye zvirongwa izvo zvinobatsira iwe kuti usatombofanirwa kutaura zvakanaka kune wako waunoda surfboard zvakare.
Mhuka dzegungwa dzinovanza Great Barrier Reef.Ndechipi pane zvese chaunofarira mhuka?
Iyo Great Barrier Reef ndiyo nzvimbo yakakura kwazvo yakanyudzwa pasi rese. Nechikonzero ichi, mhuka dzayo ndeimwe yeinonyanya kufadza pasi. Tsvaga pano mhuka dzipi dzatinogona kuwana mune ino ecosystem inova iyo UNESCO World Heritage Saiti!
Zvese nezve makuru marathoni epasi (World Marathon Majors)
Kune zviitiko zvakawanda zvemitambo zvinounza pamwechete vatambi kubva pasirese, asi pasina mubvunzo zviitiko zvakatsaurirwa kumhanya zvakazadzwa nemhomho yevamhanyi avo vanoda kuyedza hunyanzvi hwavo uye pakati pavo, pasina kupokana, mukurumbira World Marathon Majors: iyo yakakosha uye inozivikanwa Grand Marathons pasi rese munhoroondo. Verenga pamusoro uye uwane zvimwe pamusoro pavo!
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve mafungu ekuSurfing: Mhando dzemafungu zvinoenderana nekumuka kwavo, mavambo uye kuumbwa
Vanoda mitambo yakanyanyisa uye kushambadzira mumvura vanongoda chinhu chimwe: mafungu, mafungu, uye mamwe mafungu! Iko kune yakafararira wave wave kupatsanura kupfuura iwe zvaunogona kufungidzira! Iwe unotoziva kare mhando dzakasiyana dzemasaisai? Ramba uchiverenga uye uwane mhando dzese dzemafungu aripo zvinoenderana neakasiyana maitiro!
Ziva kukosha kwemagirazi ezuva muchando
Nekuuya kwechando uye nekumirirwa kwenguva refu kwechando, isu tese tinoda kuenda kuchando, kuenda kunofamba mumakomo, uye zviitiko zvine chekuita nemitambo yekunze. Maziso edu anofanira kugara achidzivirirwa nemagirazi ezuva akatenderwa kuti asatambura keratitis kana imwe mhando yekukuvara!
Ziva zvakanakira kupfeka magirazi ezuva polarkusimuka
Kubva The Indian Face® tinoda kukutsanangurira kuti zvinorevei chaizvo kuti magirazi edu ezuva ari polartakasimudza uye zvakare, isu tinotsanangura izvo zvakanakira rudzi urwu rwemagirazi ezuva ane polarakasimudzwa uye nei uchifanira kuvasarudza zvinoenderana nehunhu hwavo. Ramba uchiverenga, pano isu tinokupa iwe ese matipi uye ruzivo iwe rwaunoda!
Chii chinonzi scan polar?
Kwenguva yakareba, kwemazana emakore, gungwa rave riri protagonist huru mukukunda kweMatanda. Maitiro e "kuongorora." polar"Icho chave chiri chinangwa chevashanyi vazhinji uye vanoda kuwanikwa kwemazana emakore. Pano tinokuudza kuti chii chinonzi kuongorora. polar Uye chii chinoita ine!
10 kuziva pamusoro pemakorari matombo Chii chaunonyatsoziva nezvazvo?
Isu takapindwa muropa nezvakasikwa uye zvese zvine hukama nazvo ... Tinozvida! Neichi chikonzero, isu tinoda kugoverana newe gumi curiosities iwe iwe yausingazive nezve coral reef mune ino infographic iyo yatakugadzirira iwe. Wira murudo sesu neiyi pfuma yezvisikwa!
Kudzivirirwa kweGreat Barrier Reef Runako rwechokwadi rwakasikwa!
Great Barrier Reef muAustralia, World Heritage Site yeAustralia neUNESCO, inotambura nekusviba kwakasimba kunokonzerwa nekukwira kwetembiricha yegungwa inopedza hupenyu husina kusimba hwemakorari. Tsvaga pano nzira yekudzivirira matombo emakorari anowanikwa mumakungwa.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nemhinduro pamusoro pemagirazi polarkusimuka
Kubva The Indian Face® tinoda kukutsanangurira kuti zvinorevei chaizvo kuti magirazi edu ezuva ari polartakasimudza uye zvakare, isu tinotsanangura izvo zvakanakira rudzi urwu rwemagirazi ezuva ane polarakasimudzwa uye nei uchifanira kuvasarudza zvinoenderana nehunhu hwavo. Usasiyiwa nekusahadzika, pano tinopindura mibvunzo inowanzo bvunzwa nezve magirazi ezuva polarkusimuka!
Tsvaga zvakavanzika kuseri kweGreat Barrier Reef!
Great Barrier Reef ndiyo hombe seti yemakorari matombo pasi rese kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAustralia, mudunhu reQueensland. Kufukidza anopfuura 340.000 km2, iyo Great Barrier Reef inoonekwa sechinhu chipenyu chikuru pasi rese. Pano tinokuudza zvese nezve iyi pfuma yezvakasikwa uye zvese zvakavanzika zvainovanza!
Makapu ndiwo protagonists enhoroondo yedu!
Caps dzave nguvo dzemazuva ese uye zvishongedzo zvinoshandiswa nemamirioni avanhu kutenderera pasirese: vaimbi, skateboarders, vatambi ... Vese vanhu ava vakaita cap iri nguo yemifananidzo kune dzimwe tsika, mitambo kana kufamba. Sangana neavo vakaratidza kare uye shure munhoroondo!
Zvinhu gumi zvekudzidzira mitambo yemakomo munguva dzeCovid
Gadzirira bhegi rako uye ronga yako inotevera kushanya! Kunyangwe hosha yakachinja hupenyu hwedu muzvinhu zvese, mweya ye #Indian hairege uye inoramba ichirarama kusvika pakunyanyisa, hongu, ne "rusununguko rutsva". Tsvaga kuti ndeapi mazano uye chengetedzo matanho ekudzidzira ako aunofarira emitambo emakomo!
Kune vanofarira kusevha: Ziva kwayakatangira semutambo!
Tsvaga iyo nhoroondo uye inonakidza chokwadi nezve kufashaira! Kwapfuura makore mazana mashanu enhoroondo kubvira pakafunga muenzi wekutanga, "Ndingatonhorere kukwira masaisai aya" muPolynesian Islands, apo muongorori weChirungu James Cook akabudirira kusvika kuHawaiian Islands muna 500.
Nongedza yekugeza wako mutiraki
Usarega ngowani yako yaunofarira ichienda yakaipa! Kurumidza uye nyore gwara rekuti ungachenese sei trucker yako cap kuti uichengete iri mune yakanaka uye igare kwenguva refu.
Ski goggles Ndinozvishandisa riini uye nei?
Kutakura Ski magogorosi Izvo zvakakosha kana isu tichidzidzira uyu mutambo mune chero ayo mafomati.Utoziva here kuti ndeipi iyo ski modalities zviripo? Tsvaga nesu mamwe emhando dzakanakisa maunogona kutsika uye uzive kuti sei uchifanira kugara uchitakura dzakanaka newe! Ski magogorosi inodzivirira!
Nhoroondo yeAviator Magirazi Anonyanya kuoneka munyika!
Iwe unotoziva kare nhoroondo yemagirazi eaviator? Zvirinani kuzivikanwa se "aviators ”ndeimwe yemagirazi ezuva anotonhorera uye anoonekera kwazvo enguva dzese. Tsvaga kuti chiratidzo ichi chakazvarwa sei, uye tsvaga izvo zvakavanzika zvakavharwa mune maviri magirazi ayo asingakwanise kushayikwa kubva muunganidzwa wako.
Nguva 5 dzakanyanya kunaka kupfeka ski yako goggles
Wakave wakagadzirira zvechokwadi kukunda njodzi dzechisikigo kana iwe uchikwikwidza? Tsvaga iyo 5 yakakosha nguva mauri yaunotenda kupfeka zvakanakisa chando magogorosi!